Way buktaa cilaashka geeya!!! WQ: Nada Yuusuf Cumar | Raacdo Media
“Waxa Wanaagsanayd In Xukuumaddu Hoggaamiso Dibed-bax Salmi Ah, Innaga Oo Leh Waxaanu U Gargaaraynaa Quddus….” Sheekh Aadan-Siiro
Home Aragtida Dadweynha Way buktaa cilaashka geeya!!! WQ: Nada Yuusuf Cumar
Way buktaa cilaashka geeya!!! WQ: Nada Yuusuf Cumar
adminMay 10, 2017Aragtida Dadweynha, News0
Shalay aad ayay u faraxsanayd, nolosha rajo iyo riyooyin wanaagsan ayay kahaysatay, waxa ay sugaysay adiga, waxa ay saadaalinaysay la noolaanshahaaga, waxa ay filaysay wax wanaagsan, waxa ay ka fikiraysay sida ay kuula noolaandoonto iyo faraxadda aydun wada qaadan doontaan.
Way caafimaad qabtay oo wax xanuuna iyo wax warwar ah midna may qabin ee faceed ayay faro dheerayd.
Waatan, waad is barateen, waad u sheekaysay, waxa aad u furtay daaqaddi farxadda, daaqaddii quruxda daaqaddii nimcada iyo nolosha wanaagsan, waxa aad u samaysay ballan qaadyo wanaagsan, waxa aad u sheegtay wax kasta oo wanaagsan waxa anad tidhi sidan “Waxa aan wadaagaynaa nolol wanaagsan, ooridaydii oo aan jecelahay ayaad noqonaysaa, adiga mooyee cidkale oo aan jecelahay maj irto, wakhtigayga inta aan innoo shaqaynaayo mooyee inta kale adiga ayaa leh.” Sidaa iyo si kale oo badan ayaad tidhi.
Waad guursatay, waxa aad keensatay gurigaagi, waxa aad kasoo kaxaysay hooyadeed, abbaheed iyo walaaleheed, cid aan adiga ahayn ma weheshanayso, awal hore hooyadeed iyo abbaheed ayaa baahideeda ogaa oo fulin jiray, asxaab ayay lahayd oo ay lasoo qolsli jirtay, qofkasta oo arkaana uu jeclaa dhoollacadayn teeda.
Maanta wixiiba majiraan adiga ayay kula nooshahay, adiga ayay intaaba kaa sugaysaa, adiguna kumee? Waadigan
Waa adiga subixii kacay iska shaqo tagay adiga oo aan waydiin xaalkeeda, waxa ay kuu soodiyaarisay quraacdii iyo maryihii aad xidhaysay oo kaawiyad iyo cadarba leh. Waad iska cuntay iskana xidhatay adiga oo aan odhan mahadsanid xabiibti, waad baxday iyana waxa ay sii diyaarinaysaa qadadii, waxa ay sii hagaajinaysaa gurigii, waad timi adiga oo wajigaagu baddalanyahay, maad ku salaamin salaan wanaagsan, waxa ay kuu keentay qadadii, waxa ay kuu diyaarisay biyahaad ku maydhanaysay, waxa ay kaa seexisay carruurtii, markaas ayay waliba iyada oo quruxbadan kula soo fadhiisatay.
Maad waraysan manaad waydiin waayaheeda, ee markay is tidhi u sheekee oo warayso waadiga yidhi “Madaxa ayaa i xanuunaaya oo waan jiifsanayaa” Waad soo kacday casar waaba haddii aad seexataye, waxa ay ku siisay casariye, adiga oo quruxbadan ayaad ka tagtay, maad sii dhunkan, maad sii macasalaamayn, sifiicanna ugumaad sheegin xagga aad tagayso iyo wax ay kugu sii sugto toona.
Waxa ay samaysay cashadii, waxa ay sii qurxisay gurigii, waxa ay sii hagaajisay nafteedii oo ay uunsi iyo cadarba ku udgoonaysay, waxa ay sugaysaa adiga.
Adiguna kumee? Waxa aad ka baxday shaqadii, waaba haddii aad shaqo ku jirtaye, waxa aad la ballantay asxaabtaadi waxa aad tagtay huteelada waawayn mid kamida, waad iska soo cawaysay waad soo qososhay waad soo cashaysay waad soo nafistay kadibana waxa aad timi guriga xillima? Waa xilli!!
Ay daashay, lulootay caajistay, cadhootay oo anay waxba ku noolayn waa xilli danbe oo qof caadi ahi aanu soo jeedin.
Ayaar ayaad tidhi “Iga fur albaabka” Way kaa furtay, maad lahadal, maad ralli galin maad u sheegin waxii aad ku maqnayde sidan ayaad fashay. Cashadii macaanayd ee laguu kariyay inta ad yara dhadhamisay haddii aad doonto, ayaad iska seexatay adiga oo aan juuqba u o dhan, haddii aad u baahatana dantaada inta aad ka dhammaysatay iska seexatay oo anad hadal wanaagsan iyo dareen naxariisleh toona anad u muujin.
Bannaanka maalinna umaad saarin, maalinna si wanaagsan ugumaad sheekayn, maalinna faraxad iyo qosol fiican kaamay helin, maaliina riyadii ay filaysay umaad rumayn, waad maagtaa oo aad ku qaylisaa haddii ay ku tidhaa meel baan tagayaa, ma siisid haddii ay ku tidhaa waxaas ayaan u baahanahay, ma ka fikirtid farxaddeeda iyo quruxdeeda, waad ilawdayba in ay xaaskii aad shalay shukaaminaysa tahay. Waxa aad ka dxidhay daaqaddii rajada ee aad u furtay markaas ayaad u furtay albaabbada xumaanta iyo xiqdiga, ku wii murugada iyo muraaradillaaca.
Sidan ayaad nolosha ugu bilawday, doonaysaana in ay ku dhammaysato, marka ay ku tidhaa “Sidani si fiican maaha ee wax ka badal na ” Waxaad tidha Maxaa kaa maqan ee aad iga rabtaa” Hadalkeedaba halkaa kama soo qaadid.
Sidan ayay ku nooshahay ciil badan ayay qabtaa cid ay wax u sheegtana mahayso, way diiqadaysantahay oo diihal badan ayay dareemaysaa, way is ciilkaambiyaysaa oo ay leedahay away noloshii wanaagsanayd ee guurku? Aaway wixii aad ku rajada waynayd? Markaas ayay cuqdad iyo cadho ku noolaanaysaa, way xanuunsanaysaa dadkuna ma oga waxa haya, way iska ooyaysaa lamana garanaayo sababta, markaas ayaa la odhanayaa way buktaa cilashka hala geeyo.
Adiguna waxa aad doonaysaa in anay cadhoon waxna ku waydiin kugu buuqin kuna maagin ee ay kuu faraxsanaato, sidaasna waad ula dhaqmaysaa.
Xasuuso shalay iyo haasawihii, xasuuso markaad xusaysay magaceeda, xasuuso markaad wakhti walba lahadlaysay ee aad la hahayd “Xabiibi waan ku jecelahay” Ka farxinaysay lana sheekaysanay, daweynaysay ee aad u diidaysay dhibaatada. Yay noqon noloshii bilawgu nolol hilaac ah.
FG: Dhaqankan ragga oo dhan mawada lahaa, waa qayb kamida oo xaasaskoodu dulmi iyo darxumo kulanoolyihiin.
Previous PostSheekh Al-Shabaab Ah “Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Max’uud Xaashi Waa Godob U Taalla Isagaana Amarka Bixiyey….” DHEGAYSO Next PostDHEGAYSO: Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen Oo Gabay La Yidhaa "Doqon Dila" U Tiriyey Faysal Cali Waraabe
adminDec 18, 20170
Sheekh Xasaan Xuseen Oo Bilaabay Kitaabka Nubdatu Zakiyah Fil Qawaacidil Asliyah La Socod Wanaagsan DHEGAYSO
Sheek Berberaawi Oo Bilaabay Kitaabka Buluuqul Maraam
Muxaadaro Cusub: 10 Sababood Oo Gurigu Ku Hagaago — Sheekh Umal DAAWO
DHEGAYSO: Cudurka Tayfoodhka/Tiifowga (Typhoid) Oo Loo Helay Daawo Ka Muhiimsan Kiniinka & Irbadda
Aragtida Dadweynha 1,220